Modular Distribution Box Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Modular Distribution Box Factory
I-Modular Plastic Engenalutho Ye-MCB IP40 (TXM series) Isisekelo seplastiki
Ukuklanywa kwephaneli sekukonke kunethezeka futhi kuyakhanga, imibala ehlanganisa ubuso iluhlaza okotshani futhi ine-brawn (enikezwe ngokuya ngezidingo zombala zemiklamo ehlukene yokuhlala ngaphakathi ngaphandle kwemibala ejwayelekile). Idizayini yokumboza ubuso inika umuzwa omuhle futhi omuhle. lure Ivory, Amandla aphakeme, ungalokothi ushintshe umbala.Izinto ezisobala yi-PC. Uhlaka olungaguquki, isakhiwo esilula, nokufakwa okulula.
I-Modular Plastic Engenalutho Ye-MCB IP40 (TXM series) i-Iron Base
I-SHPN Series Ibhokisi Lokusabalalisa Amanzi
Ibhokisi lokusabalalisa eliphakeme kakhulu, ukwakheka kwephaneli jikelele kuyindawo ekhangayo eyomile ekhangayo. Okokusebenza yi-PC okwenza ukuthi kube nokuvikela ngempela, ukuvikela umlilo kanye nokuvikelwa kwe-UV. Uhlaka olungaguquki, isakhiwo esilula, futhi kulula ukufaka.Lusebenza ezindaweni ezikhethekile ezingangeni manzi, ubufakazi bothuli nezindawo ezinokugqwala.Executive standard IEC60529 EN 60309 IP65.
Ukufakwa Okungenalutho Kweplastikhi Kwe-MCB IP65 (HT Series) Ibhokisi Lokusabalalisa Ubufakazi Lamanzi
Ibhokisi lokukhanyisa le-HT Series lihambisana ne-IEC-493-1 ejwayelekile, ekhangayo futhi ehlala isikhathi eside, ephephile futhi enokwethenjelwa, esetshenziswa kakhulu ezindaweni ezahlukahlukene njengefektri, isithabathaba somuzi, indawo yokuhlala, isikhungo sokuchofoza nokunye.
MCB zokufaka (HAG uchungechunge)
Uchungechunge lwe-HAG lwebhokisi elingaphezulu luhlobo lohlaka oluhle oluhle, okulula ukufaka ibhokisi lokusabalalisa ngokwezomnotho.Lisebenzisa kakhulu ukwakha ukufakwa kwesistimu yokusabalalisa kagesi, ukufanisa nokwakha kabusha ukuhlangana kwendlu njll.
Modular Distribution Box (BE uchungechunge)
Isembozo sigobile kabili futhi sakhiwe ngokubukeka kwamazolo, okulula nokuhle.